Lalamby Fianarantsoa - Manakara Vitaina mialoha ny faran’ny taona ny asa fanarenana
Efa am-bolana maro no nisy ny olana teo amin’ny lalamby mampitohy an’i Fianarantsoa sy Manakara.
Tamin’ny ankapobeny, tsy neken’ireo mpitatitra ny fampahafantarana ny fampiharana ilay lalàna vaovao mifehy ny fifamoivoizana izay tsy nakana ny hevitr’izy ireo akory. Anisan’izany ny fampiharana ilay lamandy 1 hetsy ka hatramin’ny 5 tapitrisa Ar ho an’ireo izay mandika lalàna. Toraka izany koa ny fanomezana alalana ireo mpitatitra hafa toy ny sarety tarihin’omby sy ny mpitarika posy izay afaka hampiasa ny lalana rehetra eto an-drenivohitra. Nambaran-dRaharinirina Clemence izay nisolotena ny mpitatitra fa mahafinaritra ny finiavana ananan’ireo mpikarakara saingy rehefa misy zavatra hifanarahana tahaka izao dia ilaina hatrany ny fakana ny hevitry ny tsirairay mba tsy hisian’ny fifanomezan-tsiny. Mangataka ny hamerenana ny fandinihana io lalàna vaovao mifehy ny fifamoivoizana io izy ireo. Ho an’ireo mpitatitra manokana dia fantatra fa hivory maika izy ireo ato ho ato.